Tẹsitamenti Ikne n'Ọnu Ikwere 2 Pita 1
Nye gbarụ ọkwukwo ka mernu ele noobno a nsnị mahịa nụ nye Karaịsi ọbula kwesiri o wu bụdnu ke nọotu ogwnu Chiokike (1:3). Be kwesiri o jikwasi ezi ọka be nyernu be rikne (1:12).
Ọ dọru be aka nụ nsnị gbasịri ele ọwhnurninya aghalaghala, nụ ele ọjo ka bnanam ọgbako Chiokike nooduwhu ele kweru n'ezi ọka. N'anya Chiokike, otu ọbochi nụ lele otu pokwu awha, otu pokwu awha nụ lele otu ọbochi. Chiokike zá noogbu ọkwnu nụ ọbita mkwna a lele kpa ele badnụ neeche. Kọvu Chiokike nwernu ndidi k'agịda kwnornu nụ ọ másịla a nụ otu nye mmehie ọbula joowhu etekne.
Obekwu ikwu nụ okpukpe (1:1,2)
Kpa ele sno Nyenwe aị kwesiri o wu bụdnu be (1:3-15)
Igwugwu Karaịsi (1:16-21)
Ele ọwhnurninya aghalaghala (2:1-22)
Nyenwe aị jaavarịri berere (3:1-18)
1 Mawa, Saịmoni Pita, nye izi nụ nye dazịsni anya Jizọsi Karaịsi, naagbaznenu anụ ọkwukwo izi ka, anụ ele hiteru n'ome mma Chiokike nụ Nye Ọznohia aị Jizọsi Karaịsi kehịa ọkwnata ovu zị okne ọnu ahịa lele ke aị.
2 Oru nụ udno banụ anụ aba kpa anụ neezne nụ ruwhnu naamahịa Chiokike nụ Jizọsi Nyenwe aị.
Osukwu ikwu Chiokike
3 Chiokike jiri iknernema a nyee aị kpakara nhne a pioru a jeeji wuru bụdnu nọotu ogwnu Chiokike, kpa a zị neezne nụ ruwhnu naamahịa nye wam sukwuru aị bna n'igwugwu a nụ ọma mma a. 4 Hite n'igwugwu a nụ ọma mma a, o nyernu aị agịda mkwna zị okne ọnu ahịa, ma hite nụ nhne ele ka, anụ kehịa igwe n'oyiyi ke Chiokike, ma anụ gbanahọru nhne ọjo ke ọwa ka noovuya a.
5 Kwnornu nụ otu nhne ka, anụ gbalị nọotukwasi n'olu ọkwnata mkpọma anụ, ọma mma, n'olu ọma mma, anụ tụkwasi ọmahia nhne, 6 n'olu ọmahia nhne, anụ tụkwasi badnụ knernụ ẹhni a, n'olu badnụ knernụ ẹhni a, anụ tụkwasi ọsnuta ovu, n'olu ọsnuta ovu, anụ tụkwasi ọtu ogwnu Chiokike. 7 N'olu ọtu ogwnu Chiokike, anụ tụkwasi ọwhnun'anya rụmu nda, n'olu ọwhnun'anya rụmu nda, anụ tụkwasi ọwhnun'anya. 8 Kwnornu nụ ọ bụru nụ anụ nwernu kpakara nhne ka k'agịda, be jeeme anụ bụru ele nọornu ẹrnu ọma, naamị mkpụru dụ ọmahia Nyenwe aị Jizọsi Karaịsi. 9 Kọvu nye nwée nhne ka kpuru isni, ọ whnụ́ nhne zị ikere, o chezume nụ be snụsnamarnu a nụ mmehie ọknani a.
10 Kam kpayarụ, rụmu nda m, anụ zịri gnarnagnarna n'ome ikwu Chiokike sukwuru anụ, họhia anụ bụru nhne gwuzosiri rikne. Ọ bụru anụ mee kpam, anụ jáadna rịa rịa. 11 Kpam, be jeenye anụ rikne anụ jeeji bna nụ rime ẹli-eze ke zị ọkwnukokwnu ke Nyenwe aị nụ Nye Ọznohia aị Jizọsi Karaịsi.
12 Kam kpayarụ, me chenwanyannụ anụ kpakara nhne ka ige ọbula, ọ bụ n'ezi nụ anụ magwụ be, anụ gwuzosi rikne n'ezi ọka wam anụ nahịaru. 13 M che m nụ o kwesiri ekwesi o chenwanyanụ anụ be kpa me zị kọriri bụdnu. 14 M magwụ m nụ ige matị m joowopu anọ-ẹhni ka, lele kpa Nyenwe aị Jizọsi Karaịsi kannụ m. 15 M jaagbalị rikne m, whnụ nụ nga me nwụrnu nụ anụ jaazị neechenwanya be.
16 Ọ bụ́o ọtnutnu ruwhere be jiri akọniche tnụ, nga a mernu anụ mahịa ọvuva Nyenwe aị Jizọsi Karaịsi, anya aị lawụru whnụrnu dudugna a. 17 Ọ nahịaru ọson'anya nụ igwugwu n'aka Chiokike Nda, nga akpịri Chiokike jiri okne igwugwu dna, kaa, “Ka bụ Nnwọ m me whnụrnu n'anya, nye nhne a masịri m.” 18 A nụrnu akpịri ka hi n'oligwe dna, nga aị nụ ya zị n'olu rugwu wam zị nsọ.
19 Be mernu ikwu-ọnu ele ọwhnurninya wam gwuzosi rikne k'agịda, anụ bno nsnị nhne be gbarụ, kwnornu nụ ikwu-ọnu be nụ lele tọnji noonwu nụ hne gbarụ ọchichiri. Ọ jaazị kọriri noonwu tem dụ n'ọbochi Jizọsi jaava, iwhne a joonwu nụ rime mkpọma anụ. 20 Ke kakwo kpakara nhne, anụ mahịa nụ ọ zá nhne ọwhnurninya ọbula be gbarụ n'ọkwukwo nsọ ke badnụ nwernu rikne kọwa risi a hite nụ nhne zị n'echiche a. 21 Kwnornu nụ ọ zá ọwhnurninya ọbula be jiri echiche badnụ vu, kọvu ele badnụ kwuru ikwu-ọnu Chiokike kpa Enine Nsọ noodu be kwu.